ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: ဘုရားခြေတော်ရင်းကို ဦးခေါင်းဖြင့်ပွတ်တိုက်၍ ယသော်ဓရာ ရှိခိုးနေပုံ
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, March 06, 2012
ကြယ်ပြာ March 6, 2012 at 1:13 PM
ပုံမမြင်ရဘူး ... ပုံတင်ထားလားဟင် ?
ခရစ္စတလ် March 6, 2012 at 3:02 PM
မယ်ယသော် ရင်ကွဲမှာစိုးတာလည်း တစ်ကြောင်း၊ ဘဝအဆက်ဆက် အနစ်နာခံ ပါရမီဖြည့်ကျင့်ဘက်ဖြစ်လို့ ကျေးဇူးရှိတာတစ်ကြောင်း။ ဒါကြောင့် ယသော်ဓရာနန်းဆောင်တော်ကို မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ကြွရောက်တော်မူခြင်းဆို ပိုမှန်မယ်။
usai March 17, 2012 at 11:12 AM
Your Question ပုံမမြင်ရဘူး ... ပုံတင်ထားလားဟင် ?
Here you go http://www.dhammapalace.org/2012/03/blog-post.html
sweetie wittymyo October 14, 2012 at 1:21 PM
ယသော်ဓရာ ဆုံးပါးသွားတော့အရပာတဖိုလ် ရသွားလားသိချင်ပါတယ်.
NAING ZAYYA August 15, 2014 at 9:29 PM
yes, sweetie wittymyo